WWDC Chikumi 13 Chiitiko Chichange Chichipepetwa Live | IPhone nhau
Apple inogona kutishamisa gore rega rega nenzira churu, asi hazviwanzo kuzviita pazviitiko umo inopa masystem ayo matsva kana, pamusoro pazvose, iyo iPhone. Nenzira iyi, uye sezvataitarisira, chiitiko chekutanga chirevo cheiyo WWDC 2016 inozotepfenyurwa mhenyu kuitira kuti chero mushandisi azvione kubva kune iPhone, iPad kana iPod Kubata neIOS 7.0 kana gare gare, Mac ine Safari 6.0.5 kana gare gare inomhanya OS X 10.8.5 kana gare gare kana PC kubva kuMicrosoft Edge browser paWindows 10. Tevere, kuti urege kuchipotsa, une runyorwa nemahedhiyo munyika dzakasiyana.
WWDC Keynote Zvirongwa
Kuti uve nechokwadi, tinogona zvakare kuziva iyo chaiyo nguva kubva IZVI ZVINONZI. Chiitiko ichi chinozotepfenyurwa pane rakakosha peji iro Apple rakagadzirira iro ipapo raunogona kuwana kubva kwariri HERE.
Chii chatichaona gore rino kuWWDC? Huye, manyuko akati wandei anoti izvozvo Siri ndiye achange ari protagonist yechiitiko. Chinyorwa chine simba rakawanda kwazvo chichafumurwa icho chine runyerekupe rwekusiya makwikwi kumashure kumashure. Kune rimwe divi, ichave ichiwanikwa kune Mac kubva OS X 10.12, chimwe chezvinhu zvavachapa pachiitiko ichi. Vachavhurawo SDK inobvumidza vanogadzira kuti vabatanidze rutsigiro rweSiri mune avo mafomu, kwandaigara ndichiisa muenzaniso mumwe chete: tinogona kutumira WhatsApp kubva kuna Siri tisingavhure iko kunyorera sekugona kwatinoita kutumira Tweet, kugadzirisa yedu Facebook kana kutumira email.
Iyo shanduro nyowani dzeIOS, tvOS, watchOS uye redhiyo yakagadzirirwa Music app uye shanduko kuApple Music. Tichaona zvese, kana tikabvisa kusahadzika, Muvhuro unotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Segore rega rega, chiitiko cheJune 13 cheWWDC chichave chichiratidzwa zviripo
Samsung kuvhura inochinjika skrini mbozhanhare muna 2017